VaMliswa Vanosungirwa Kutyora Mitemo yeCovid-19
Mumiriri weNorton muNational Assembly, VaTemba Mliswa, vasungwa kumba kwavo vari pakati pemusangano nevatori venhau vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kuparira kweCovid-19.
VaMliswa vasungwa apo vange vari kuita musangano nevatori venhau pamusoro pemashoko ange ari kutenderera pamadandemutande pamusoro pavo nemumwe aimbove shamwarikadzi yavo.
Mumwe mutori wenhau apinda pamusangano uyu, Nyasha Ndoro, audza Studio kuti musangano wange uri pakati apo mapurisa apinda achiti anoda VaMliswa.
Mapurisa aenda naVaMliswa kuBorrowdale police station uko vanonzi vapomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kweCovid-19.
Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyathi, vati VaMliswa vasungirwa mhosva yekuunganidza vanhu zvisina mvumo, kunova kutyora mutemo weNational Lockdown.
Asi VaMliswa vari kuramba nyaya iyi vachiti musangano wanhasi wange wakaraongwa neveMedia Centre.
Mukuru weMedia Centre, Enerst Mudzengi, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu hauna kuitwa paMedia Centre sezvange zvakatarisirwa.
VaMliswa vanotarisrwa kuenda kudare mangwana
Mune imwewo nyaya, mutungamiriri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly, VaLovemore Madhuku, vanoti hurumende haifaniri kuramba yakavhara nyika nekuda kweCovid-19 vachiti yave kufanira kushandisa dzimwe nzira kurwisana nedenda iri.
Vachiitaura nevatori venhau pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, VaMadhuku vati hurumende yakaita zvakanaka pakuvhara nyika senzira yekudzivirira Covid-19 asi vati nyika yave kufanira kuvhurwa.
Asi vati havasi kufara nekuti hurumende haisi kuburitsa pachane huwandu hwevanhu vari kufa kana kurwara neCovid-19.
Vatiwo vanoda kuti hurumende iburitse pachena kuti hurongwa hwenhomba yekudzivirira chirwere huchafambiswa sei.
Vatiwo bato ravo harina mufaro nekufoira kwakaita vana pabvunzo dzeGrade 7 vachiti izvi zvinoratidza kuti hurumende yaregerera dzidzo kwenguva yakareba.
Vatiwo zvikoro zvinofanira kuvhurwa kunyange hazvo kuine Covid-19, vachiti hanvasi vana vese vari kudzidza pamadandemutande saka zvakakosha kuti kunze kwemachiremba nevakoti, varairidzi vanofanirawo kupihwa nhomba iyi nekukasika.
Sachigaro werimwe remasangano anomirira varairidzi munyika, reProgressive Teachers Unions of Zimbabwe, Dr Takavafira Zhou, vati vanobvumirabna naVaMadhuku kuti dzidzo yaregerwa kwenguva yakareba uye panofanira kuitwa mushandira pamwe kumutsiridza dzidzo munyika.
Asi vatiwo chikuru chinofanira kugadziriswa muzvikoro inyaya dzemihoro yevarairidzi avo vasiri kufara.
Vatiwo varairidzi vakatoita chisungo chekuti havasi kuzobaiwa nhomba yeCovid-19 kudzamara mihoro yavo yagadziriswa.
Mumwe mukuru mukuru mubazi rehutano uyo asina kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti varairidzi havasi pavanhu vachatanga kubaiwa nhomba asi akati zvichaziviswa svondo rinouya mushonga uyu wasvika munyika kuti vachapinda papi.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vakazivisa nemusi weChipiri kuti nhomba iyi ichatanga kabaiwa varapi, nevamwe vashandi vehutano nevakwegura.